Shiinaha Central Console & DC Drive Golaha Wasiirada iyo soosaarayaasha | Mingshuo
Taxanaha OL ee darawalnimada DC waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu kaxeeyo mootada DC, waxaana si ballaaran loogu dabaqay warshadaha dhagax -tuubka tuubada. Wareeggiisa xakamaynta birlabka ee daciifka ah ayaa hubin kara xawaare ballaaran oo nidaaminaya baaxadda mashiinka DC. Wareegga xakamaynta dhijitaalka ee dhijitaalka ah ee DC ma aha oo kaliya inuu ka dhigo wadista DC inay leedahay shaqo deggan iyo karti faragelin xoog leh, laakiin sidoo kale waxay leedahay istcimaal isticmaale oo wanaagsan oo ku habboon hawlgalka. moduleka xakamaynta xiisaha, wareegga xakamaynta DC ee dhijitaalka ah.
Golaha Wasiirrada Dc
Golaha wasiirrada DC Drive-ku waxay leeyihiin 3 taxane: hab kicinta kumbuyuutar-kumbuyuutarka, dhammaan dhijitaalka ah ee Euro Drive-ka oo dhan iyo hab-ballaarinta Euro Drive oo dhan-digital ah. Qaado koontarool laba-wareeg ah oo xawaare leh, oo leh mudnaanta xeerka xawaaraha ballaaran, waxqabadka aadka u firfircoon, isku xirnaanta matoorada badan iwm.
Qalabkan dibedda wuxuu khuseeyaa warshadaha fudud, samaynta waraaqaha, balaastikada, biibiilaha iyo alxanka tuubada, kiimikada, sibidhka iwm.
Heerka danab: 460v/230v Heerka hadda: 100A ~ 3000A
Dhammaan digital (taxanaha Euro Drive)
Hadda la qiimeeyay
Xeerarka wadista iyo xawaaraha ee mashiinka DC, sahayda sare ee korantada DC.
Design Naqshad dhisme oo kaamil ah
Design. Naqshadeynta is -dhexgalka ee wadista DC -ga oo leh astaamaha qaab -dhismeedka is haysta iyo cabbir yar. Nooca asalka ah ama qaab dhismeedka nooca fidinta waa ikhtiyaari.
②.Loorist Main loop wuxuu qaataa hiitarka hawo qaboojinta hawo oo ku habboon rakibidda iyo dayactirka.
Design Naqshadeynta iswaafajinta elektromagnetism -ka ee caadiga ah, shucaaca elektromagnetism -ka ayaa la kulmay heer qaran.
④.Naqshadeynta golaha wasiirada oo xiran, buuxinta shuruudaha deegaanka ee adag goobta.
Control Nidaamka xakamaynta dhijitaalka oo buuxa
①.Qaado taxanaha 590DIGITAL ee kontaroolada dhijitaalka ah oo buuxa si loo xaqiijiyo kicinta saxda ah ee saxda ah oo leh xakamaynta sare ee xawaaraha mootada iyo xawaaraha jawaabta degdegga ah.
Halbeegga hawlgalka mootorku wuxuu qaataa dejinta menu dhijitaal ah, taas oo ku habboon oo dabacsan HMI wanaagsan.
Awoodda korontadu waxay leedahay hawl ilaalin oo kaamil ah oo leh shaqo la isku halleyn karo iyo heerka guuldarrada oo hooseysa.
1.Soo dooro qaabka wadista DC sida korontada lagu qiimeeyo iyo awoodda lagu qiimeeyo matoorka DC.
2. Darawalnimada DC -gu waxay u baahan tahay inay dhigato 20% awoodda korontada.
Console-ku wuxuu gaaraa kontoroolka fog iyo qawaaniinta awoodda ee welder-ka HF-ka adag, oo lagu rakibay LCD; sidoo kale waxay leedahay tilmaamayaal danab armature ah, korantada beerta ee golaha wasiirrada wadista DC iyo tilmaamayaasha korantada DC, DC hadda ku jira alxanka. Shaqada kontoroolka loop -ku waa ikhtiyaar. Console -ku wuxuu leeyahay kala duwanaansho naqshadeyn iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan iyo tirada ku habboon golaha wasiirrada wadista DC -ga.
Hore: Nidaamka Qaboojinta Biyaha jilicsan
Xiga: Wax-ku-oolnimada sare ee Shiinaha H-Beam hf induction alxanka 1000kw mashiinka alxanka